राति अवेला सम्म निन्द्रा लाग्दैन ?? यसरी पाउनुहोस् गहिरो निन्द्रा – Sudarshan Khabar
विकसित मुलुकमा मानिसहरूको ज्यान लिइरहेको अल्जाइमर्स, क्यान्सर, मुटु र धमनीसम्बन्धी रोगहरू, मोटोपन, डिप्रेसन, चिन्ता र आत्महत्याको पनि निद्राको अभावसँग केही न केही सम्बन्ध पाइएको छ।
अनिन्द्राले रोग निम्त्याउँछ । जब राम्ररी निन्द्र पर्दैन, हाम्रो शरीर भद्दा हुन्छ । काम गर्न जाँगर चल्दैन । मस्त सुत्न नसक्नु वा गहिरो निन्द्रा लिन नसक्नु आफैमा शारीरिक तथा मानसिक जटिलता हो ।
यसले थप रोग निम्त्याउने खतरा पनि रहन्छ ।
एक रातमा कति समय निदाउने ? यसको जबाफ उमेर अनुसार केहि फरक हुन्छ । खासगरी बच्चाले अधिक समय सुत्नुपर्ने हुन्छ, तुलनात्मक रुपमा बयस्कले कम ।
अक्सर किशोर-किशोरी, युवा, बयस्क, बृद्धबृद्धाले औसत सातदेखि आठ घण्टा सुत्नुपर्ने बताइन्छ । यद्यपी सुत्ने अवधीले मात्र हुँदैन, त्यो कति गहिरो र मस्त थियो भन्ने कुरा मूख्य हो ।